Rev. Zen Sian Lun – Full Gospel Assembly
ဆရာမဒေါ်ဇင်ရှင်းလွန်းကို ဆရာမ လွန်းခက်ဟုလည်းခေါ်ကြပြီး အဖ ဦးဒိုငိုက်လန် နှင့် အမိ(ဒေါ်ဒိမ်ခန့်ဝုန်) တို့မှ ကလေးမြို့တာဟန်း၌ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မွေးချင်းမောင်နှမ (၅) ဦးအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မူလတန်းပညာကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိ အ.မ.က (၅) စိန်အိုးကျောင်၊ အလယ်တန်းပညာကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အ.ထ.က (၂) ဒဂုံတောင်၊ အထက်တန်းပညာကို အ.ထ.က (၄) တောင်ဒဂုံ စတဲ့ကျောင်းတွေတက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။အမှုတော်မြတ်၌ ပါဝင်ရင်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်း အောင်မြင်ကာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၅) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ B.A (Econimic) ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့တယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာတော့ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိခဲ့ပြီးအခြားသောဘာသာစကားပြောကာ Full Gospel Assembly သင်းအုပ်ဆရာကြီး Rev. Dr. Dam Suan Mung မှ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မှ စတင်ကာ အသင်းတော်တွင် ဥပုဒ်စာဖြေ ဆရာမအဖြစ် ပါဝင်အသုံးတော်ခံခဲ့ပြီး ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ် အပတ်စဉ်(၂) FGBTC တွင် ဓမ္မပညာကိုဆည်းပူးပြီး Di-ploma လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။
International School of Ministry မှလည်း ကောင်း Asia Access လည်းကောင်းDiploma များကို လည်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မတ်လမှစတင်၍ သင်းအုပ်ဆရာကြီးအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရှေးမဆွက ရွေးကောက် ထားသော အကြံအစည်ဖြင့် Full Gospel Assembly အသင်းတော်တွင် အစမ်းခန့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ် မေလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အမှုတော်မြတ်၌ လိုအပ်နေသောကွက်လပ်များတွင်အသုံးပြုရန် ဆက်ကပ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်သည် အဖက်ဖက်၌ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ အမှုတော်မြတ်၌ ဝမ်းမြောက်စွာပါဝင်ရင်း ၂၀၀၂ ခုနှစ် (၈) လပိုင်း (၉) ရက်နေ့မှာတော့ လိုင်စင်ရ အမှုတော်ဆောင်လက်မှတ်ရရှိကာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် သိက္ခာတော်ရ အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ရွေးကောက်ချီးမြှောက်ခြင်းကို ခံစားရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မြန်မာပြည်အနှံ့နယ်လှည့် ဧဝံဂေလိခေါင်းဆောင်အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံရပြီးများစွာသော ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရသေးသည့်လူသားများထံတွင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကယ်တင်ခြင်းသတင်း စကားကို ဝေဌခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၃-၂၀၀၉ အထိ အသင်းတော်၏ အသင်းသားစာရင်းကိုင်၊ ၂၀၀၉ -၂၀၁၆ အထိ အသင်းတော်၏ အထွေထွေ(ငွေ) စာရင်းကိုင်အဖြစ်ပါဝင်ဆက်ကပ်နေသူဖြစ်ပြီးအသင်းတော်၏ ဇိုမီးဘာသာဖြင့် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွင်လည်း တက်ကြွစွာဖြင့်ပါနေသူဖြစ်လဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၂၅) ရက်နေ့တွင် အဘ ဦးမြင့်အေး + အမိ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့် တို့၏ စတုတ္ထမြောက်သား Full Gospel Assembly အသင်းတော်ရဲ့ လိုင်စင်ရအချိန်ပြည့် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် ဆရာစောဇော်ကိုအောင် နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး Peter Langh Sian Khai နှင့် Joseph Lian Khan Piang တို့ သားနှစ်ဉီးမွေးဖွားပါတယ်။
အမှုတော်မြတ်တွင် ပါဝင်ချိန်မှ စ၍ ဆရာမစွဲကိုင်သော ကျမ်းချက်မှာ ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာ ၄:၁၃။ ။
ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော် အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏။
Position: Evangelism & Church Accounting